Indlu epholileyo kwilizwe
Ifumaneka ngaphandle kwelali encinci yaseWalton, le ndlu yelizwe enqabileyo isenokungabi ntle, kodwa inayo yonke into oyifunayo xa ubaleka kancinci. Imbali yasekuhlaleni ithi le ndlu yakhiwe ngamaplanga ederi endala eyayifudula iphezulu endleleni. Olo bisi alusekho... kodwa le ndlu incinci ithambileyo isekho- kwaye ilinde inkampani yakho.
Unokuhlala kwi-rockers kwiveranda engaphambili kwaye umamele umlambo ngaphesheya kwendlela okanye ujabulele isiselo kwi-hammock kwi-patio yangasemva ngelixa isidlo sakho sipheka kwi-grill.
Indawo yokungena engaphambili inesitovu esikhulu somthi esincedisana nenkqubo yokufudumala yebhodi yombane yendlu.
Igumbi lokuhlambela likumgangatho wokuqala kwaye linebhafu/ishawari, indlu yangasese, isinki, iwasha kunye nesomisi. Ngelixa indlu izele zii-quirks kunye nomtsalane, igumbi lokuhlambela liqulathe eyona mfihlakalo inkulu ekungekafuneka siyisombulule. . . umatshini wokuhlamba. Isebenza kakuhle... nje ukuba awusebenzisi umjikelo "oqhelekileyo". Sicebisa ukuba usebenzise nawuphi na omnye umjikelo!
Ikhitshi eligcweleyo linefriji/ifriji, umatshini wokuhlamba izitya, isitovu, imicrowave, ioveni yetoaster kunye nemicrowave, kunye nomenzi wekofu kunye neketile. Iikhabhinethi ezisezantsi kunye needrowa ziqulethe iindidi zeembiza, iipani, izitya zokubhaka, izixhobo zokusika kunye nekhitshi. Iikhabhinethi eziphezulu ziqulethe izitya, iiglasi kunye neemagi ze-6. Kukho kwakhona i-spice rack rack kunye ne-staples ezininzi ezingenakonakala kwiikhabhinethi ukuze uqalise ukupheka.
Ngaphandle kwekhitshi kukho indawo yokutyela enetafile nezitulo ezintandathu.
Igumbi lokuhlala lineencwadi ezininzi onokuthi uzifunde ngexesha lokuhlala kwakho, kunye nezitulo zeklabhu ezimbini kunye nesofa. (Ubhengezo olupheleleyo - uGregory wayeqinisekile ukuba uza kulakhela ithala leencwadi kule ndlu phambi kokuba abe negumbi lokuhlambela elisebenza ngokupheleleyo!) Kukho umabonakude oqhagamshelwe kwisidlali seDVD kunye neRoku.
Omabini amagumbi okulala akumgangatho ophezulu. Igumbi lokulala eli #1 linebhedi enebhedi ehonjiswe phantsi. Isinxibo, isitulo sakudala esishukumayo kunye neeshelufu ezineencwadi zabantwana zigcwalisa le ndawo.
Igumbi lokulala eli-#2 linebhedi elingana ukumkanikazi enedrowa ezine ezinkulu zokugcina ngaphantsi, indawo zokulala ezimbini, isibane, idesika kunye nesitulo.
Asihlali edolophini okwangoku, kodwa sizakufumaneka ngefowuni okanye nge-imeyile ukuba kuvela iingxaki.